ယခုတနင်္ဂနွေ - Indianapolis Startup Weekend | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 2, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
Startup Weekend သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုရှိသော web developer များ၊ စီးပွားရေးမန်နေဂျာများ၊ ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂုရုများနှင့်စတင်သောဝါသနာရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောပြင်းထန်သော ၅၄ နာရီအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Indianapolis သည် Startup Weekend Event ကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ကျင်းပမည်လား။ ၇ ရက်နေ့တွင် IUPUI ကျောင်းဝင်းရှိ Purdue အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာကျောင်း။
ဒီပွဲကိုဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်သောကြာနေ့ညနေ ၅ နာရီမှာဓာတ်လှေကားပြိုင်ပွဲနဲ့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်ပါ ၀ င်သူများသည်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အရည်အချင်းအစုံအပေါ် အခြေခံ၍ အသင်းများကို ဖွဲ့စည်း၍ စုစည်းလိုသည့်ကုမ္ပဏီများကိုမဲပေးကြသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တနင်္ဂနွေညနေခင်းတွင်အဖွဲ့များသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ထုတ်ကုန်ကိုသရုပ်ပြခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးတင်ပြချက်များကိုတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
သင်တန်းသားများအပြင်အပြင် Startup Weekend သည်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းမှထောက်ပံ့ပေးသူများ၏ရက်ရောမှုမှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ပွဲစီစဉ်ခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေရန်ပံ့ပိုးသူများကိုရှာဖွေသည်။ သငျသညျစပွန်ဆာဖြစ်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်ချင်လျှင်, မှာ website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ http://indianapolis.startupweekend.com/.
Startup Weekend သည်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရုံသာမကစစ်မှန်သောစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Indianapolis ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က Indiana ပြည်နယ်ကိုစနေ၊ Lorraine Ball ကပြောကြားရာတွင် Rainmaker ဥက္ကဌနှင့် Roundpeg Marketing ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်
Startup Weekend, LLC သည်ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၊ ဘိုလ်ဒါမြို့တွင်အခြေစိုက်ပြီး၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မဲပေးခြင်းဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့များမှတစ်မြို့သို့တစ် ဦး အဖြစ်အပျက်များကိုစီစဉ်ပေးသည်။ http://startupweekend.com/.
ယခင် Indiana မှ Startup Weekend အစီအစဉ်များကို Bloomington, IN နှင့် West Lafayette, IN တို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများအတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးများစွာသောသူတို့သည်အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်လာသည်။
Tags: Guy Kawasakiဆုံးဖြတ်ချက်တွေလူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရေးသားသူခြေရာခံ